EN877 Tuubooyinka Qalqalka Gruub, Birta Isku-Jirka Aan Jirin, Daboolka Manhole iyo Gratings - Jipeng
Waxaan nahay ku takhasusay dhuumaha! Waxaan nahay khabiir ku takhasusay khiyaamada!
EN877 Tuubooyinka Birta ee Dhabta ah
Qalabka birta aan xasaasiga ahayn ee ay kujiraan maaddada Gaskets
Tuubooyinka Birta Dulucda & Xirmooyinka Nalalka ah
Daboollada Manhole iyo Xirmooyinka
Waxaa la asaasay 1998, shirkaddeenu waxay leedahay taariikh dheer, taas oo soo-saaris ka badan 20 milyan oo doollarka Mareykanka ah. Waxaan haysanaa alaabooyin khibrad buuxda u leh si aan ugu adeegno macaamiisheenna shisheeye, oo ay ku jiraan maareeyaha mashruuca khaaska ah si ay ugala xaajoodaan faahfaahinta alaabada, u maareeyaan dukumiintiyada iwm. waxay kaloo sameyn karaan badeecado kala duwan ama qaybo gundhig ah iyadoo la raacayo sawirada macaamiisha shisheeye ee sawirada ama samballada.
Macaamiilku waxay ku raaxeysan karaan keenis badan oo wax ku ool ah oo alaab ah halkan, faa'iidooyinkayagu waa in loo soo qaado noocyo kala duwan alaab ah hal weel oo buuxa, macaamiisheena qaar ayaa xitaa u baahan in ka badan 5 nooc oo alaab ah hal mar. Taasi waxay u fududaan doontaa macaamiisheena.
Xakameynta tayadayadu waa adeeg kale oo qiimo leh oo loogu talagalay macaamiisheenna. Xaqiijinta soo-saarka ama ka hor inta aan la keenin, xakamayntayada tayada waxay aadeysaa warshadda si ay u dardar-galiso gudbinta iyo hubinta tayada iyo warbixin qoraal ah. Maqaallada aan fiicnayn ayaa diidi doona xakamayntayaga tayada leh, waxaan waydiisan doonaa soo-saaraha inuu soo saaro ama hagaajiyo tayada illaa ay ka fiicnaanayaan la kulanka macaamiisha shisheeyaha ah.
EN877 Fitamiyo Epoxy Epoxy Dahabsan
EN877 Meelaha BML
Tuubooyinka EN877 KML
EN877 Tuubooyinka TML
BS4622 Spigot iyo Socket Pipes
ASTM A888 Qalabka Ciidda ee Iron Iron
Cover Cover Manhole iyo Frame